ရာသီဥတု အလိုက်အားကစား လေးလုပ်ပြီး အချိုးကျကျ လှပနေ တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် လေး ကိုဆက်ဆီ ကျလွန်းအောင် ကပြထားတဲ့ မေရတီဇော် ရဲ့ ဗီဒီယို…. – Shwe Naung
ရာသီဥတု အလိုက်အားကစား လေးလုပ်ပြီး အချိုးကျကျ လှပနေ တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် လေး ကိုဆက်ဆီ ကျလွန်းအောင် ကပြထားတဲ့ မေရတီဇော် ရဲ့ ဗီဒီယို….
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ပုံလေးထဲမှာ မေရတီဇော် တစ်ယောက် Gym ဆော့ နေတဲ့ ပုံတွေ ကို တင်လာ ပေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် တစ်ယောက် ဆွဲဆောင် မှုမှု ရှိရှိနဲ့ အ မိုက်စားဖြစ်လွန်း နေတဲ့ ပုံတွေတင် ပေးရင်း နေပြီး
သူမရဲ့ ” ရာသီဥတုက boring ဖြစ်စရာ ကောင်းနေပေမဲ့ အလှပျက် မှာစိုးလို့ ကိုယ်က တော့ ပျင်းလို့ မဖြစ်ပါဝူးလေ ” caption လေးနဲ့ ပရိသတ် ကြီးကို အတွက် တင်ပေး ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
သူမရဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်အ လှကတော့ မြင်သူတိုင်း ငေးလောက် အောင် ကို ညို့ယူ ဖမ်းစားနေတာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်း မေရတီဇော် ရဲ့ အ မိုက်စား ပုံလေးကို ကြည့်ရှု နိုင်စေ ရန်ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။
သွယ်လျတဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် လေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ တက်သစ်စ မော်ဒယ် မေရတီဇော် ကို သိကြမယ်ထ င်ပါတယ်။ ဆွဲမက်ဖွယ်ရင်သပ်ရှု မောစရာ အမိုက်စားပုံရိပ် လေးတွေနဲ့ ပုရိသ တွေရဲ့ ရင်ကို ဆွဲဆောင်ညို့ယူ ထားတဲ့
အလန်းစား မော်ဒယ်သရုပ် ဆောင် လေးဖြစ်ပါတယ်။ သွယ်လျ ပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် နဲ့ အတူ လှပကြည် လင်တဲ့ အသားအရေ ကိုပါ ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး သူမရဲ့ အမိုက် စားပုံတွေနဲ့ ညို့အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင် သူလေးလ ည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်နဲ့ အင်တာဗျူး များစွာ ကိုလည်း လူမှုကွန် ယက်ဖေ့ဘွတ် ပေါ်တွင် အများဆုံးတင် လေ့ရှိတာ လည်းတွေ့ ရပါတယ်။ လတ်တလော မှာတော့ သူမ ရဲ့ အမိုက်စား အလှတရား တွေနဲ့ ညို့ ယူဖမ်းစားထားတဲ့
Gym ဆောတဲ့ ပုံတွေကို အများဆုံး တင် အလန်းစား ပုံလေး ကိုဖော်ပြ ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ပုံလေးဟာ ကြည့်ရှုသူ တွေ များပြား ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပုရိသတွေ အများဆုံး ဝန်းရံခြင်းခံ နေရတာ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မတ်မတ်သင်ဇာ ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး…..
အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ လှပနေတဲ့ နန်းမွေစံရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး……….